Shabaab oo dib u qabsaday deegaanka Toora toorow | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Shabaab oo dib u qabsaday deegaanka Toora toorow
Shabaab oo dib u qabsaday deegaanka Toora toorow
Kadib markii shalay si nabadgelyo leh Ciidamada Xoogga dalk & kuwa Ameerikaan ay ula wareegeen gacan ku haynta deegaanka Toora toorow ee Gobolka Shabellaha hoose, ayaa ciidankii ay dib uga soo baxeen Magaaladaasi.
Xoogaga Shabaab ayaa sheegtay inay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Toora toorow, kadib markii ciidamadii ay isaga baxeen.
Al Shabaab waxa ay sheegteen xaaladda deegaanka inay degan tahay ciidamadii qabsaday deegaankana ay ka war heleen weerar culus oo dhanka Shabaab kaga imaan rabay, sidaasi awgeedna cabsi darteed ay uga baxeen Toora toorow.
Ciidanka Xoogga dalka & kuwa Mareykanka ee shalay gudaha u galay Magaalada Toora toorow, ayaa halkaasi ka soo qabtay Maxaabiis Al Shabaab ah, kuwaasi oo la keenay Magaalada Muqdisho, sida uu sheegay Afhayeenka Wasaaradda Warfaafinta Somaliya.
Toora toorow waxaa Shabaab laga qabsaday sanadkii 2014-kii balse waqtiyo kala duwan oo ciidamada ay gaareen Magaaladaasi kuma aysan nagaadin oo dib ayeey uga soo baxeen.
Toora toorow waa xarunta ugu wayn Shabaab ee dadka ay ugu yeeraan, xilliyada ay dadka canshuurta ka qaadayaan & marka dacwadaha dadka lagu soo oogayo.